Maxkamadda Magaalada Hargeysa ee Maamulka Somaliland ayaa Saddex sano oo xabsi ah ku xukuntay Naciimo Abwaan Qorane oo ah gabar baraha bulshada wax ku qorta oo ciidamada Booliska Somaliland ay horay u xireen. Inantan ayaa lagu soo oogay labo dambi oo Maxkamadda ay ku kala...
C/laahi Faarax Wehliye Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Dowladda Federalka Somaliya ayaa ku guuleystay Doorashada Kursigii Xildhibaanimo ee uu ka geeriyooday Bootaan Ciise Caalin. Doorashada ayaa lagu qabtay Magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud, waxaana ku tartamaayay...
Raisul wasare kheyre Oo amray in Xilka laga qaado Gudoomiyihii Aan Xilkiisa Gudan
Ra’iisul Wasaaraha Somaliya Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in loo baahan yahay masuuliyiinta Maamulada Degmooyinka inay gutaan waajibaadka Qaran ee saaran. Isaga oo ka hadlaayay kulan ammaanka ku saabsan oo ka dhacay Magaalada Muqdisho, ayaa Gudoomiyeyaasha Degmooyinka wuxuu...
Ku xigeenka hawlgalka Midowga Afrika ee Amisom Simon Mulongo, ayaa amar ku siiyay taliyayaasha kala duwan ee Ciidanka Amisom in ay fuliyaan qorshaha Amisom ay kaga baxeyso Soomaaliya si loo fuliyo xeerkii Golaha ammaanka ee Qaramada Midoobey. Mr. Mulongo,waxaa uu ka hadlaayay...
Raiisal Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa kulan amniga ku saabsan wuxuu la qaatay Saraakiisha ciidamada Booliska iyo hoggaanadooda. Kulanka waxaa qayb ka ahaa Duqa Magaalada Muqdisho C/raxmaan Yariisow, waxaana si wayn loogu gorfeeyay arrimaha amniga la xiriira iyo qorshayaasha...
Magaalada Dammaam ee dalka Sacuudiga waxaa maanta oo Axad ah ka furmaya shir madaxeedka 29-aad ee wadamada ku bahoobay Jaamacadda Carabta, kaasi oo arrimo badan looga hadli doono. Shirka Madaxda Jaamacadda Carabta ayaa la qorsheeyay in diirradda lagu saaro qadiyadda Falastiin,...
Sida qorshaha uu yahay, maanta oo Axad ah waxaa lagu wadaa in magaalada Dhuusamareeb ee Gobolka Galgaduud oo ah Caasimada Maamul Goboleedka Galmudug lagu qabto doorashada kursigii ugu dambeeyey ee ka bannaanaa Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya. Kursigan loo...